Madaxweynaha Jubbaland oo Ku taliyay in dhaqaalaha la siiyo AMISOM loo wareejiyo Ciidamada Xoogga. – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 15th March 2019 085
Axmed Maxamed islaam Axmed madoobe Madaxweynaha maamulka jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa Ku taliyay in dhaqaalaha la siiyo AMISOM xilligan loo wareejiyo Ciidamada Xoogga dalka, si buu yiri looga adkaado dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland Waxa uu sheegay in laga maarmo ciidamada AMISOM oo lagu bixiyo dhaqaalo fara badan, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in aysan jirin shaqo dhab ah oo ay ka qabteen dalka, isagoona sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay in ay isku tashato.
Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa waxaa uu dhaliilay u jeediyay Dowladda Federalka soomaaliya waxaa uuna ku eedeeyay in ay ka gaabisay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in aysan jirin cid la xisaabtanta Hayadaha deeq bixiyaasha iyo AMISOM, taasi ayuu sheegay in ay sabab u tahay dib u dhaca jira, maadaama xilli fog uu qaatay howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya.
Hadalka Madaxweynaha ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa Xilli Soomaaliya ay ku sugan yihiin 22 kun oo askeri oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee (AMISOM)., waxaana ka mid ah dalalka ciidamada u soo diray Soomaaliya Ugandha,Kenya, Burundi, Jibuuti ,Itoobiya iyo dowladdo Kale.
Madaxtooyada Dowlada Galmudug oo beenisay warqad been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada kuxariiraan
Daawo Sawirro: Alshabaab oo soo bandhigtay qasaaraha ka dhashay dagaalkii bariire ka dhacay iyo gaari gubtay oo yaala…